Nkwupụta Iwu Nzuzo Usoro eji Mmekọrịta Ahịa Cannabis
Stumari, LLC. Usoro ojiji
Dị irè dị ka nke July 11, 2018
Nchịkọta ojiji Nchịkọta
Stumari na-ewepụta usoro maka imekọrịta na nkwukọrịta n'etiti ndị ọka iwu (“Ndị Ọrụ Na-ahụ Maka Ọrụ”) na Ndị Ọrụ Na-achọ Enyemaka Iwu (Ndị ahịa Iwu). Stumari abụghị ụlọ ọrụ na-ahụ maka iwu, ndị ọrụ mkpesa ọka iwu ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ, na anaghị ekwe nkwa nsonaazụ. Biko jiri Stumari mee ihe n'ụzọ ziri ezi ma biko gụkwuo banyere ọrụ anyị na Nkebi nke 2 n'okpuru.
Are na-ahụ maka nchekwa nke akaụntụ gị, yana ọrụ niile a na-eme n'okpuru akaụntụ gị. Biko gụkwuo banyere ọrụ onye ọrụ na Nkebi nke 3 n’okpuru.
Anaghị anabata ụfọdụ omume, dịka iji ọrụ maka ọrụ iwu akwadoghị na Stumari. Biko gụkwuo banyere omume okike na Nkebi nke 4 n’okpuru.
Ejighi ọdịnaya, dị ka nkụpu egwu ma ọ bụ ọdịnaya nke na-emebi ikike ikike ọgụgụ isi nke ndị ọzọ, Stumari. Stumari nwere ikike iwepu Ọdịnaya Onyonye-esiri na-emebi iwu anyị. Biko guo ihe banyere ihe ndi emeputara n’ime Usoro nke 5 n’okpuru.
Termsfọdụ okwu pụrụ iche na-achịkwa ndị ọrụ ndụmọdụ Stumari. Dị ka ọmụmaatụ:
Ndị ọrụ ndụmọdụ abụghị ndị ọrụ ma ọ bụ ndị nnọchite Stumari.
Enweghị mmekọrịta ọkaibe na onye ọka iwu ejikọtara ya na Stumari, ọ nweghị ọrụ dịịrị onye zoro ezo na-ebilite, site na iji weebụsaịtị Stumari, gụnyere ikenye ọrụ.
Enwere ike ịmalite mmekọrịta ọka iwu na ndị ahịa site na iji ọrụ dị n'etiti ndị ahịa Iwu na Ndị Ọrụ Na-ahụ Maka Iwu.
Ndị Ọrụ Na-ahụ Maka Ndụmọdụ bụ naanị ọrụ maka ịgba mbọ hụ na ozi, nkwupụta, ma ọ bụ mgbasa ozi ọ bụla ha biputere na weebụsaịtị Stumari na-agbaso iwu niile na ụkpụrụ omume omume.
Stumari anaghị eme ụdị nkwa ọ bụla banyere ikike iwu, ikike ma ọ bụ nke iwu ndị ndụmọdụ nwere ike depụtara na weebụsaịtị anyị.
Ndị ọrụ na-ahụ maka ndụmọdụ nwere onwe ha iji mepụta ma dowe profaịlụ na weebụsaịtị Stumari. Ọ bụ ezie na Stumari na-agbasi mbọ ike maka azụmahịa iji gosipụta ikike onye ọrụ ndụmọdụ iji mee iwu, Stumari anaghị emechitere anya nzụlite ma ọ bụ iru onye ọrụ.
Onye ọrụ ndụmọdụ ga-abụ onye ọrụ nyocha nke a na-ahụ anya site na ịnye Stumari na nkwenye ọzọ na ọ bụ onye ọka iwu, ikikere, na ọfụma na-eme iwu. Ndị ọrụ nyochachara nke ọma nwekwara ike ịkwụ ụgwọ ego maka ịnweta ọrụ Stumari ọzọ na ngwaọrụ njikwa omume. Stumari anaghị akwado ma ọ bụ na-atụ aro maka ndị ọrụ ndụmọdụ ma ọ bụ ọrụ dịịrị onye na-ahụ maka iwu ka ọ kpachara anya tupu ya etinye onye ọrụ ndụmọdụ maka ọrụ iwu.
Enweghị ego maka ndị ahịa iwu biputere arịrịọ ọrụ na Stumari ma ọ bụ jiri ngwa ọ bụla ma ọ bụ akwụkwọ ọ bụla Stumari dị na Stumari. Ọrụ ma ọ bụ ego nhazi (dịka ego kaadị akwụmụgwọ) nwere ike itinye na akwụkwọ ọnụahịa a na-akwụ ụgwọ site na Stumari.
Biko gụkwuo banyere ndị ọrụ ndụmọdụ na Nkebi 6.
Stumari rubere isi na Digital Millennium Copyright Act nke nchekwa ọdụ ụgbọ mmiri ahụ. Ọ bụrụ na ikwere na ihe Stumari dị na ma ọ bụ jikọtara ya na-emebi ikike nwebisiinka gị, a na-agba gị ume ka ị gwa Stumari dabere na Iwu Nchịkwa Ọdịnaya Digital Millennium Digital Stumari. Biko gụkwuo banyere Stumari's DMCA Policy na Nkebi 8 n'okpuru.
Stumari nwere ike izitere gị email dịka akụkụ nke ọrụ ya. Nwere ike ịpụ na nkwukọrịta email. Biko gụkwuo banyere nkwukọrịta email na Nkebi nke 10 n'okpuru.
Stumari nwere ike ịgbanwe usoro ndị a n'oge ọ bụla. Agbanyeghị, Stumari ga-eme ka ị mata mgbanwe mgbanwe ihe dị na okwu ndị ahụ site na nzipu ozi na saịtị obibi ya na / ma ọ bụ ziga email na adreesị ozi-e ị nyere Stumari mgbe ị debanye aha. Biko gụkwuo maka ndozigharị usoro usoro ojiji ndị a na Ngalaba 17 n'okpuru.
Biko lee Stumari Nzuzo nke Stumari maka ozi ndi ozo banyere ikike ndi oru na Stumari.
Biko lee Usoro zuru ezu maka ozi ndị ọzọ.
Daalụ maka ịhọrọ Stumari dịka ikpo okwu maka ahụmịhe nke iwu gị. Usoro ojiji ndị a na-achịkwa ojiji nke Ọrụ ahụ niile site na weebụsaịtị nke dị na https://www.Stumari.co yana ọdịnaya niile, ọrụ yana ngwaahịa dị na ma ọ bụ na weebụsaịtị. Anyị ghọtara na ịgụ usoro nkwekọrịta iji rụọ ọrụ bụ ọrụ dị egwu mana biko gụọ nkwekọrịta a nke ọma tupu iji weebụsaịtị Webụsaịtị Stumari. Ọ na-atụle ọdịdị nke ọrụ Stumari; iwu Stumari na-atụ anya ka ndị ọrụ soro na weebụsaịtị anyị yana ọrụ ya; mmekọrịta dị n'etiti Stumari, ndị ọrụ anyị, na ndị ọrụ ndụmọdụ anyị; yana nkọwa iwu nke na-achịkwa iwu na mmekọrịta ndị a. N’ihi na ọ bụ nkwekọrịta dị mkpa dị n’etiti anyị na gị, ndị ọrụ anyị, anyị agbaala mbọ mee ka o doo anya ma nwee ọrụ enyi dị ka o kwere mee.
Site na ịbanye ma ọ bụ jiri akụkụ ọ bụla nke weebụsaịtị, ị ga-ekwenye ka usoro iwu nke nkwekọrịta a sie ike. Ọ bụrụ n’anyị ekwenyeghi n’usoro na ọnọdụ niile nke nkwekọrịta a, mgbe ahụ ị gaghị enwe ike ịbanye na Weebụsaịtị ma ọ bụ jiri ọrụ anyị ọ bụla. Weebụsaịtị ahụ naanị maka ndị rurula afọ 18.
Ụdị nchịkwa dị na __________________________________________________________________
Nkọwa. A na-eji usoro ndị a akọwa Okwu ndị a ma nwee nkọwa ndị akọwapụtara. Youkwesịrị ịma ihe okwu nke ọ bụla pụtara.
Okwu ahụ bụ "Ọrụ" na-ezo aka ọrụ nke Stumari nyere, gụnyere enweghị ohere ọ bụla na ndị Stumari na ntanetị ntanetị; ngwaọrụ nkwukọrịta; njikwa akwụkwọ na ngwọta nchekwa; na ọrụ ịkwụ ụgwọ. Stumari anaghị enye ọrụ ntụgharị ọka iwu ma ọ bụ rụọ ọrụ dịka ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ. Anyị na-ewetara ndị ọrụ anyị ohere ị ga-eji na-ezukọ ma na-agakọ ozi anyị na ndị na-ahụ maka nyocha.
Okwu ahụ bụ “Nkwekọrịta” (nke a nwekwara ike ịtụgharị aka n'ime ya ka “Usoro Ojiji” a) na-ezo aka, usoro, na ọkwa niile enyere na akwụkwọ a.
Ebe nrụọrụ weebụ a na-ezo aka na weebụsaịtị Stumari dị na https://www.Stumari.com, ntinye akwụkwọ na subdomain niile na ọdịnaya niile, ọrụ na ngwaahịa dị na ma ọ bụ na weebụsaịtị.
“Stumari,” “Anyị,” na “Anyị” na-ezo aka Stumari, Inc. yana ndị otu anyị, ndị isi, ndị enyemaka, ndị isi na ndị ọrụ. Ndị ọrụ ndụmọdụ abụghị akụkụ nke Stumari.
“Onye ọrụ,” “” ”na“ nke gị ”na-ezo aka onye, ​​ụlọ ọrụ, ma ọ bụ nzukọ eleta ma ọ bụ na-eji weebụsaịtị ma / ma ọ bụ Ọrụ ahụ. Onye ọrụ nwere ike ịbụ onye ahịa iwu, onye ọrụ ndụmọdụ, ha abụọ ma ọ bụ.
“Ndị na-ahụ maka ndị ọrụ” na-ezo aka na ndị ọrụ ndụmọdụ edebanyere aha na ngalaba iwu nwere ike ịmekọrịta ma nye ọrụ nkwekọrịta ma ọ bụ jụọ ndị ahịa Iwu ma ọ bụ ndị ọrụ ibe ndụmọdụ. Ndị ọrụ ndụmọdụ abụghị ndị ọrụ ma ọ bụ ndị nnọchite Stumari. Biko lee Nkebi nke 6 na nkwekọrịta a maka ozi ndị ọzọ gbasara ndị ọrụ ndụmọdụ.
"Ndị ahịa nke iwu" na-ezo aka 1) Ndị ọrụ na-enyefe arịrịọ maka atụmatụ nke ndị ọrụ ndụmọdụ maka ịnye ọrụ iwu maka ego ("Ọrụ"); na 2) Ndị ọrụ na-esonyere ndị ọrụ ndụmọdụ maka ọrụ ndị ọzọ, nke, maka ebumnuche nke Nkebi 7 n'okpuru, nwere ike ịgụnye ọrụ na-adịgide adịgide, karịa ọrụ mbụ nke mebere mmekọrịta Onye Mmekọrịta Iwu na Onye Ọrụ. Ndị ọrụ ndụmọdụ na-enye ndụmọdụ nwere ike wepụta atụmatụ ("Bids") maka Ọrụ ndị dị otú a, ha nwekwara ike igosipụta usoro nke mmekọrịta ahụ na Onye Ọrụ Iwu site na leta mbinye aka ma ọ bụ nkwekọrịta ede ede. Biko lee Nkebi 6 (b) maka ozi ndị ọzọ gbasara Ọrụ, Nzuzo, na Ndị ahịa Iwu
“Ederede” na-ezo aka na ọdịnaya gosipụtara ma ọ bụ gosipụtara site na weebụsaịtị, gụnyere ederede na-enweghị oke, akwụkwọ, ozi, data, edemede, echiche, onyonyo, eserese, eserese, ngwa, ndekọ vidiyo, ndekọ ọdịyo, ụda, atụmatụ, atụmatụ, na ngwa ndị ọzọ dị na Weebụsaịtị. Ọdịnaya gụnyere, n’enweghị mmachi, Onye ọrụ Nke emepụtara okike nke Onye Ọ bụla Stumari nyefere (Onye ahịa Iwu ma ọ bụ Onye Ọrụ Ndụmọdụ).
Banyere Stumari Ọrụ.
Ọrụ Stumari bụ ikpo okwu maka imekọrịta na nkwukọrịta n'etiti ndị ọka iwu na ndị na-achọ enyemaka gbasara iwu. Ọrụ Stumari na-enyere ndị ọrụ ndụmọdụ ọrụ aka Stumari; mmekorita di nfe site na ngwa oru nkwukọrịta Stumari; nhazi akwụkwọ na nchekwa; yana mfe, ego ịkwụ ụgwọ na ngwaọrụ involos.
Stumari abụghị Iwu Iwu. Stumari enyeghi nnochite anya iwu. Stumari adịghị enye ndụmọdụ gbasara iwu ọ bụla, echiche iwu, ndụmọdụ, ntinye, ma ọ bụ ndụmọdụ. Ndị ọrụ ndụmọdụ abụghị ndị ọrụ ma ọ bụ ndị nnọchite Stumari. Stumari adịghị etinye aka na nkwekọrịta n'etiti Ndị Ọrụ ma ọ bụ na nnọchite nke Ndị Ọrụ. Na oge ọ bụla enwere ike ịnwe Stumari maka ọrụ ma ọ bụ nhapụ nke Onye Ọrụ Ọ bụla na-eme maka ndụmọdụ maka gị.
Stumari abụghị Ọrụ Ntinye Iwu Ọchịchị ma ọ bụ Agencylọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọrụ. Stumari abụghị ndị ọrụ nnọchite anya ọka iwu ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ. Stumari ahọpụtaghị ma ọ bụ kwado onye ọrụ ndụmọdụ ọ bụla maka inweta onye ahịa iwu. Ọ bụ ezie na Stumari na-eji mgbalị ezi uche dị na azụmahịa siri ike iji gosi na Ndị Ọrụ Na-ahụ Maka Ọrụ bụ ndị ọka iwu ikikere, anyị anaghị emere akwụkwọ ikike, nkwa ma ọ bụ nnọchite ikike ikike, ikike, ogo ma ọ bụ iru eru nke Onye Ọrụ Ọ bụla. Stumari anaghị enye ikike ma ọ bụ kwe nkwa na ndị ọrụ mkpuchi kpuchie mkpuchi ọrụ. Stumari na-agba ndị ahịa iwu ka ha nyochaa Onye Ọ bụla na-ahụ maka ndụmọdụ tupu ịnakwere ndụmọdụ ọkachamara.
Stumari anaghị ekwuchite ọnụ maka ndị ọrụ ya. Stumari na-enye nnọọ ụzọ dị elu nke ndị na-achọ enyemaka maka iwu nwere ike isi kwukọrịta ma kwenye na ndị ọkachamara na iwu. Stumari anaghị akwado nke ọ bụla n'ime ndị ọrụ ndụmọdụ ya, ọ kwenyeghịkwa nkwupụta nke ndị ọrụ ndụmọdụ na-eme n'elu ikpo okwu. Stumari anaghị emechite anya gbasara iru eru nke ndị na-eweta ọrụ iwu.
Stumari anaghị ekwe nkwa nsonaazụ. Site n'oge ruo n'oge, ndị ahịa iwu nwere ike itinye akwụkwọ nyocha nke Ndị Ọrụ; nyocha ndị a anaghị abụ akwụkwọ ikike, ikike, ma ọ bụ amụma banyere ihe ga-esite na ya gbasara usoro iwu ọ bụla. Stumari agaghị enwe ibu ọrụ ma ọ bụ ibu nke ụdị ọ bụla maka ọdịnaya Ọdịmma-ndenye ma ọ bụ ndụmọdụ iwu ọ bụla ị zutere ma ọ bụ site na weebụsaịtị, yana ojiji ọ bụla ma ọ bụ ịdabere na ọdịnaya Onye ọrụ mepụtara ma ọ bụ ndụmọdụ iwu bụ naanị n'ihe ize ndụ gị.
Iji Stumari emepụtaghị Mmekorita Onye Ọkachamara na Stumari. Stumari anaghị enye ndụmọdụ gbasara iwu. Ebumnuche ọ bụla maka Stumari Service ezubeghị, ọ bụghị mebe mmekọrịta mmekọrịta na onye ọka iwu. Nkwurita okwu ọ bụla site na Stumari agaghị enwe nzuzo. Stumari anaghị ebu iwu maka omume ma ọ bụ ihe omimi nke Onye ọrụ nyocha ọ bụla na-eme maka ịgakwuru maka gị.
Ọrụ Ndị Ọrụ. Gị, naanị gị, na-ahụ maka akaụntụ gị yana ihe ọ bụla na-eme mgbe ị na-abanye ma ọ bụ na-eji akaụntụ gị. Nchebe gị bụ ọrụ gị.
Nchebe Akaụntụ Onye ọrụ. Ọ bụrụ na ịdebanye aha maka Ọrụ ahụ, ị ​​ga-emepụta akaụntụ ahaziri iche nke gụnyere aha njirimara pụrụ iche na paswọọdụ iji nweta Ọrụ ahụ wee nweta ozi sitere na Stumari. Are na-ahụ maka idobe nchekwa nke akaụntụ gị, ị na-ahụkwa maka ọrụ niile na-eme n'okpuru akaụntụ ahụ yana omume ndị ọzọ emere na akaụntụ ahụ. Agree kwenyere na ị ga-agwa Stumari ozugbo nke iji akaụntụ na-enweghị ikike, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na-emebi iwu. Anyị agaghị ebu ọrụ maka ibu, ọghọm, ma ọ bụ mmebi ọ bụla na-esite n'iji kọmputa gị, ngwaọrụ mkpanaka gị, ma ọ bụ ngwaọrụ mgbakọọ ndị ọzọ na / ma ọ bụ akaụntụ ọ bụla. '
Mmekọrịta ya na ndị ọrụ ndụmọdụ. Maka anyị enweghị ike ị nwude mgbakwunye nke ọ bụla n'ime ndị ọrụ ndụmọdụ maka mkpa gị, anyị na-agba ndị ahịa iwu ka ha nyochaa Onye Ọ bụla na-ahụ maka ndụmọdụ tupu ịnabata ndụmọdụ ọkachamara. Ndị Ahịa Legallọ Ọrụ Iwu nwekwara ike ịrịọ nkwekọrịta nkwekọrịta iwu ede ede na-akọwapụta usoro, akarị, njedebe na ọnọdụ nke nnọchite anya.
Enweghi ntụkwasị obi na ntinye-esite na njirimara. Edebere Ode akwukwọ-sitere na ntanetị na ntanetị, dịka ntanetị blọọgụ, ka enyere ya maka ebumnuche ozi, na enweghị mmesi obi ike na Ọdịnaya Onye Edebere-Ede bụ eziokwu, ziri ezi ma ọ bụ zie ezi. Ọdịnaya Onye Edebere-Onwe Ya abụghị dochie anya ndụmọdụ iwu ọkachamara ma ọ bụ arịrịọ inye ndụmọdụ gbasara iwu. Ikwesighi igbu oge ma obu igha ihu ndụmọdụ iwu ma obu ileda ndumodu oka iwu nke sitere na nke di n’ime omuma-aru oru. Igbu oge n’ịchọ ndụmọdụ iwu dị otú ahụ nwere ike ime ka ịghara ịgbagha maka ihe ọ bụla ị nwere ike, dabere na iwu (mgbochi) nke amachi. Edebere Ihe Nwepu Oji Onye Edemede site na onodu o bula ma obu obodo ozo.
Nrube isi na iwu. Na-anọchi anya ma nye nkwado na: (i) ịnwere ikike, ma ị toro nká n'iwu ike gị, kee onwe gị na Nkwekọrịta a; (ii) ojiji nke Ọrụ ahụ ga-abụ naanị maka ebumnuche nke nkwekọrịta a nyere; (iii) iji ọrụ ahụ agaghị emebi ma ọ bụ mebie ikike ikike ọgụgụ isi nke ndị ọzọ; na (iv) iji ọrụ ahụ ga-agbaso iwu obodo, steeti na gọọmentị etiti, iwu na ụkpụrụ yana ụkpụrụ Stumari ndị ọzọ.
Jiri ma Duzie mmachi. A na-ahapụ gị ka iji ọrụ ahụ ma ọ bụrụhaala na ị soro iwu ole na ole. Mmachibido ndị a na-egbochi ma na-eduzi njikwa bụ iwu ndị anyị na-atụ anya ka ndị ọrụ soro mgbe ị na-eji Ọrụ ahụ. Ọ bụghị anyị kpatara ọdịnaya nke ndị ọrụ anyị biputere, anyị nwekwara ikike imechi akaụntụ ma ọ bụrụ na anyịchọrọ.
A machibidoro ọdịnaya. I kwenyere na ịgaghị agabiga ọdịnaya ọ bụla (nke gụnyere sọftụwia, ederede, onyonyo, ma ọ bụ ozi ndị ọzọ) ịgaghị agafe ọnọdụ ọ bụla
iwu akwadoghị ma ọ bụ na-akwalite ọrụ iwu akwadoghị
aha, mmechuihu, mmegbu, iyi egwu, ma ọ bụ ịkpalite ime ihe ike megide mmadụ ọ bụla ma ọ bụ otu
iii. bụ ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ, ịkpa oke, ma ọ bụ na-emegbu ma ọ bụ menye mmadụ ma ọ bụ otu ume dabere n'okpukpe, okike, agụụ mmekọahụ, agbụrụ, agbụrụ, afọ, ma ọ bụ nkwarụ.
bụ spam, nke igwe ma ọ bụ site na usoro, na-eme mgbasa ozi na-akwadoghị ma ọ bụ na-enweghị nkwado, akwụkwọ ozi n'ụdị, ụdị ọ bụla nke ịrịọ na-enweghị ikike, ma ọ bụ ụdị lọtrị ma ọ bụ ịgba chaa chaa ọ bụla;
nwere ma ọ bụ wụnye nje ọ bụla, ikpuru, malware, Trojan ịnyịnya, ma ọ bụ ọdịnaya ọ bụla emebere ma ọ bụ nke ga - emebi ma ọ bụ gbochie arụ ọrụ nke sọftụwia ọ bụla, akụrụngwa, ma ọ bụ akụrụngwa ekwentị ma ọ bụ mebie ma ọ bụ nweta ikike na - enweghị ikike na data ọ bụla. ozi ndị ọzọ nke ndị ọzọ;
mebiri ikike ọ bụla nwere nke ọ bụla, gụnyere patent, ụghalaahịa, nzuzo azụmahịa, nwebisiinka, ikike nke ọha, ma ọ bụ ikike ndị ọzọ.
vii. na-eatesomi mmadụ ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla, gụnyere ndị ọrụ anyị ma ọ bụ ndị nnọchite ọ bụla; ma obu
viii. na-emebi nzuzo nke ndị ọzọ ọ bụla.
Ndị ọrụ ga-agaferịrị afọ 18. represent na-anọchi anya na ị gaferela afọ 18. Stumari anaghị emebere ọdịnaya anyị maka ụmụaka ma ọ bụ ndị na-eto eto na-erubeghị afọ 18, anyị anaghị anabata ndị ọrụ ọ bụla n'okpuru 18 na Ọrụ anyị. Ọ bụrụ na anyị mata banyere Onye ọrụ ọ bụla na-erubeghị afọ 18, anyị ga-akwụsị akaụntụ Onye ọrụ ahụ ozugbo.
Enweghị ọrụ maka mmekọrịta Onye ọrụ; Stumari May Nyochaa Mmekọrịta. Ikike ọ bụla, mfu ma ọ bụ mmebi ọ bụla nke na - esite na mmekọrịta nke Onye Okike ọ bụla, gụnyere, na - enweghị oke, Job Posts, nke itinye ma ọ bụ nweta site na iji Ọrụ ahụ bụ naanị ọrụ gị. Na uche anyị, anyị, ma ọ bụ teknụzụ anyị na-arụ ọrụ nwere ike nyochaa ma ọ bụ dekọọ mmekọrịta gị na ọrụ ahụ, agbanyeghị abụghị nkọwapụta nke iwu gị.
Ikike ịkwụsị akaụntụ. Anyị nwere ikike (ọ bụ ezie na ọ bụghị ọrụ) iji, n'echiche anyị, kpebie ma ọ bụ omume Onye ọrụ ọ bụla kwesịrị ekwesị ma dabere na Usoro ojiji ndị a, ma ọ bụ kwụsị ma ọ bụ gọnarị ịnweta ọrụ ahụ na Onye Ọrụ ọ bụla maka onye ọ bụla. ihe kpatara ya, na iji ma ọ bụ na-enweghị ọkwa mara.
Njirimara Onye Ọrụ-Nweta. I nwere ọdịnaya gị, mana ị nyere anyị ikike ụfọdụ ka ọ dịrị, ka anyị wee nwee ike igosipụta ma kesaa ọdịnaya ị biputere. Anyị nwere ikike iwepu ọdịnaya ma ọ bụrụ na anyịchọrọ.
Ibu ọrụ maka ndị ọrụ esetịpụtara. Nwere ike ịmepụta ọdịnaya, edere ma ọ bụ na ọzọ, ka ị na-eji Ọrụ (“N'ụwa-ewepụta ọdịnaya)”. Na-ahụ maka naanị ọdịnaya nke, yana nsogbu ọ bụla na-esite na, ọdịnaya Ọdịnaya Nke Onye Okike nke i biputere, bugoo, jikọọ ma ọ bụ tinye ya na Ọrụ ahụ, n'agbanyeghị ụdị ọdịnaya ahụ. Ikike ọ bụla, mfu ma ọ bụ mmebi ọ bụla nke na - esite na iji ọdịnaya Onye Ederede N'ihe ọ bụla ị na - ewepụta ma ọ bụ nweta site na iji Ọrụ ahụ bụ naanị ọrụ gị. Anyị anaghị ahụ maka ngosipụta ọhaneze ọ bụla ma ọ bụ jiri ọdịnaya ọdịnaya emepụtara ya.
Ikike Post. You na-anọchi anya ma nyekwa ikike na ị nwere ikike biputere ọdịnaya niile etinyere-n’enye ndenye. Kpọsị, Ikwenyela na ị tozuru oke ikikere nke ato nke metụtara ọdịnaya Nke Ndabere, ma ewerela usoro niile dị mkpa iji gafee iji kwụsị ndị ọrụ okwu ọ bụla achọrọ.
Stumari nwere ike gbanwee ma ọ bụ wepu ọdịnaya. Anyị nwere ikike (ọ bụ ezie na ọ bụghị ọrụ) iji, n'echiche anyị, kpebie ma ọ bụ nke Onye Okike wepụtara site na nke ọma ma na-agbaso usoro ojiji a, ma ọ bụ jụ ma ọ bụ wepu ọdịnaya ọ bụla nke enwetara site na ya, na echiche anyị nwere ezi uche. , na-emebi iwu Stumari ọ bụla ma ọ bụ n'ụzọ ọ bụla nke na-emerụ ahụ, na-ekwesịghị ekwesị, ma ọ bụ na-emegide ya. Stumari gara n'ihu na -ekere ịkpụzi ma dezigharị ma gbanwee ụdị a ga-egosipụta na ntanetị.
Onwe-nwe nke ihe omimi emere. Ewezuga Ọdịnaya nke sitere na Stumari, anyị anaghị ekwu na ịnweta ọdịnaya ọ bụla a na-ebugharị, chekwaa ma ọ bụ hazie na akaụntụ gị. Re na-ejigide ikike, ikike, na ibu ọrụ nke ihe ndị esetịpụtara site na ntinye akwukwọ. May nwere ike ijikwa ohere ịnweta ọdịnaya Nke Onye Okike gị site na ntọala n'ime akaụntụ ọrụ gị.
Akwụkwọ Enyemaka. Site na iji ohere iji Stumari jiri ọdịnaya ị bugoro na Ọrụ ahụ n'ụzọ ezi uche na-enweghị imebi ikike ọ bụla ị nwere na ya, ị na-enye anyị ikike ndị a: site na biputere ọdịnaya ọ bụla site na weebụsaịtị, ị na-enye nkwado Stumari na ndị ga-anọchi ya zuru ụwa ọnụ, onye nwere ike ịdabere na ya, n'ụzọ zuru ezu. pakwụ andgwọ na ikike eze, na enweghị ikike iji, mepụtaghachi, gosipụta, gbanwee, gbanwee, kesaa ma rụọ ọdịnaya ahụ na ebumnuche azụmahịa Stumari. Ikikere a enyeghi Stumari ikike iresị idenye ihe eji abanye ma ọ bụ kesaa ya n'èzí Webụsaịtị anyị. Akwụkwọ ikike a ga - akwụsị n'oge ewepu ọdịnaya ahụ na weebụsaịtị.
Ndị Ọrụ Ndụmọdụ. Ndị ọrụ ndụmọdụ bụ ndị ọka iwu nwere onwe ha, ndị na-enye gị ọrụ maka ndụmọdụ ndị ahịa nwere ike ịbụ ndị ọka iwu. Ha abụghị ndị ọrụ Stumari.
Enweghi mmekọrita nke onye ọka iwu site na iji weebụsaịtị. Ojiji webụsaịtị Stumari agaghị enwe ike imekọrịta mmekorita-ndị ahịa na ndị ọrụ ndụmọdụ. Ozi edere ma ọ bụ mee ka ọ dị na ma ọ bụ site na weebụsaịtị ahụ, gụnyere na enweghị mmachi, azịza ọ bụla maka ajụjụ iwu kwadoro ezigara na weebụsaịtị; ozi na Nduzi na Akwụkwọ Stumari; ozi ezigara ọha na eze na Webụsaịtị; ma ọ bụ ozi ezigara na onye ọrụ anaghị arịọ ya ka ọ bụrụ ndụmọdụ ndụmọdụ, ọ bụghị ihe nzuzo, ọ naghị emepụta mmekọrịta onye ọka iwu. A na-atụle Ihe Nwepụta-Onwe Onye Ọrụ.
Mmekọrịta Onye Ọkacha-Onye Mmekọrịta site na iji Ọrụ. Enwere ike ịmalite mmekọrịta ọka iwu na ndị ahịa site na iji Ọrụ n'etiti ndị Ọrụ na Ndị Ọrụ Na-ahụ Maka Naanị. Ndị ahịa iwu nwere ike biputere ọrụ na Ọrụ ahụ. Ndị ọrụ ndụmọdụ ga-enyefe ihe ngosi na nkọwa nke ọrụ ndị a tupu nnabata. Na nnabata, oke nnọchite anya onye ọrụ ndụmọdụ na-anaghị akwụ ụgwọ naanị ihe ekwenyero na Nkwekọrịta ọ gwụla ma Onye Ọrụ Iwu na Onye Ọrụ Na-ahụ Maka Usoro ga-emezi nhazi ha site na leta itinye aka na aka ma ọ bụ nkwekọrịta edere ede, nke ga - esonye na nkwekọrịta edere na - adịbeghị anya ga - agbatị. buru ụzọ kwenye n'ihe ndị ị nabatara na mbụ. Ikwu ego abughi nnọchi anya nke mmadu ma obu ekwenti iji nye aka ikike inwere ikike ibanye n ’ikike gi banyere iwu gi, ikwesiri ị dabere na ozi enwere na Bid a dika ndụmọdụ iwu. Stumari na-agbasi mbọ ike iji hụ na nzuzo nke ịre ahịa na ozi ozi nkeonwe ndị ọzọ na Ọrụ anyị, mana enweghị ike ịme nkwa nzuzo. Nkwukọrịta chọrọ ihe nzuzo ga-eme n'azụ Stumari Ọrụ, dịka site na ekwentị.
Ọrụ Ndị Ọrụ. Ndị Ọrụ Na-ahụ Maka Ndụmọdụ bụ naanị ọrụ maka ịgba mbọ hụ na ozi ọ bụla, arịrịọ, ma ọ bụ mgbasa ozi ha biputere ma ọ bụ tinye na weebụsaịtị ahụ, gụnyere na-enweghị mmachi Ọdịnaya Onye Edebere, yana nkwukọrịta ọ bụla ha nwere ike isoro ndị ahịa chọrọ site na weebụsaịtị ma ọ bụ Ọrụ ahụ, soro iwu niile enwere na ụkpụrụ nke omume ọkachamara, gụnyere ndị metụtara usoro iwu akwadoghị yana ndị na-achịkwa ụdị, ụdị ma ọ bụ ọdịnaya nke nkwukọrịta ndị ahịa, mgbasa ozi, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ.
Kwụ ofgwọ nke Ndị Ọrụ. Specificfọdụ usoro akọwapụtara na-achịkwa ndị ọrụ ndụmọdụ na ịkwụ ụgwọ.
Stumari abụghị Ihe Ndị Na-emechi Ya. Ndị ahịa iwu nwere ike ibute ndị ọrụ ndụmọdụ site na ikenye ọrụ na nnabata nke Ọrụ. Usoro nkwekọrịta ndị a dị naanị n'etiti onye ahịa na onye ọrụ ndụmọdụ. Stumari agaghị abụ ndị ọrụ maka ọrụ ọ bụla maka ọrụ nyefere site na Ọrụ anyị, ọ gwụla ma ọ bụ onye ọrụ Stumari zipụrụ. Stumari na-ahazi nkwekọrịta ndị a site n'inye usoro maka njikwa nkwukọrịta na ngwaọrụ ịkwụ ụgwọ.
Akwụ esgwọ Legalgwọ Iwu Nzizi Nye Ndị Ọrụ. Stumari anaghị enye ọrụ iwu yana ọ naghị akwụ ụgwọ maka ọrụ iwu. A na-ebufe ego a na-akwụ ndị ọrụ ndụmọdụ site na ụzọ ịgba ụgwọ Stumari na akaụntụ ịkwụ ụgwọ onye ọrụ, obere ọrụ ejikọtara na ụgwọ nhazi (dịka ego kaadị kredit).
iii. Ndị Ọrụ Ndụmọdụ ga-enweta ụgwọ site na ọrụ maka azụmahịa azụmahịa niile. Ndị ọrụ ndụmọdụ nke na-anata ọrụ n'aka ọrụ ahụ ga-enweta ụgwọ site na ọrụ ahụ maka azụmahịa niile metụtara onye ọrụ ahụ, gụnyere azụmahịa ndị ọzọ esoroghị Job na mbu. Ọ bụrụ na onye ọka iwu iwu anaghị adị njikere ma ọ bụ enweghị ike ịkwụ ụgwọ site na Stumari, Onye ọrụ na-ahụ maka ndụmọdụ kwetara ịgwa Stumari maka nhazi ịkwụ ụgwọ ọhụụ. Kwụ bygwọ site na onye ahịa na-ahụ maka ndụmọdụ onye ọrụ, nke a na-arụ na mpụga nke na-enweghị ọkwa maka Stumari, bụ akụkụ nke abụọ nke nkwa nkwado ịkwụ ụgwọ Stumari / nchedo dị ka atọrọ na Nkebi nke 14 na 15 n'okpuru, ọbụlagodi na ha nwere ike metụtara na mbụ ịkwụ ụgwọ emere n'ime ọrụ ahụ.
Koodu na Nkwalite. Stumari nwere ike iji aka ya mepụta koodu nkwado enwere ike ịgbapụta maka otuto akaụntụ, ma ọ bụ atụmatụ ndị ọzọ ma ọ bụ uru metụtara ọrụ Onye Ọrụ Ndụmọdụ, dabere na usoro ndị a na usoro ọ bụla ọzọ Stumari guzobere na ntọala koodu nkwado. “Koodu Koodu”). Specificfọdụ usoro akọwapụtara na-achịkwa ndị ọrụ ndụmọdụ na ịkwụ ụgwọ.
Iji Koodu Nkwalite anaghị egosi mmekọrịta dị n'etiti onye ọka iwu na ndị ọka iwu. Site n'oge ruo n'oge, ndị ahịa nke Iwu nwere ike ịnweta ohere nke Stumari na-eweta nke na, na-eji ego Stumari iji kwụọ ụgwọ maka ụgwọ iwu nke ndị ahịa Kwụrụ na Ndị Ọrụ Na-ahụ Maka Ọrụ. Ojiji nke ụdị kuki a apụtaghị mmekọrịta ọ bụla na onye ọka iwu n'etiti Stumari na ndị ọrụ ndụmọdụ ebe ejiri coupon maka akwụkwọ ịgba ụgwọ ọ bụla site na onye ahịa iwu.
Ndị na-ege ntị chọrọ ka ekwesịrị iji koodu mkpọsa maka ebumnuche ha, na iwu kwadoro.
Enwere ike ghara imeghachite koodu nkwalite, ere ma ọ bụ bufee ya n'ụzọ ọ bụla, ma ọ bụ mee ka ọha na eze nwee ohere (ma ọ bụrụ na ekwusara ya na nnọkọ ọha ma ọ bụ na uzọ ọzọ), belụsọ na Stumari nyere ya hoo haa Koodu Koodu enweghị ego ọ bụla ma Stumari nwere ike ịgbubi ma ọ bụ nwee nkwarụ oge ọ bụla, maka ebumnuche ọ bụla, tupu ojiji gị. Stumari nwere ikike idobe ma ọ bụ iwepu nzere ma ọ bụ atụmatụ ndị ọzọ ma ọ bụ uru nke enwetara site na iji Koodu Nkwalite site n'aka gị ma ọ bụ onye ọrụ ọ bụla ọzọ na Stumari na-ekpebi ma ọ bụ kwenye na ojiji ma ọ bụ mgbapụta nke Koodu Usoro ahụ bụ njehie, wayo, megidere iwu, ma ọ bụ na-emebi usoro Usoro Usoro Nkwupụta dị adị.
Onye Ọrụ Na-enye Ndị Ọrụ Banyere Ọrụ.
7.1 Gwọ nke Ọma maka Ọrụ. N'ọnọdụ ebe Onye Ọrụ Ndụmọdụ nabatara inye ọrụ (“E kpuchitere ọrụ”) nke Onye ọrụ (nke ọ bụla, “Onye na-ewe mmadụ n'ọrụ”), ma ọ bụ oge ebighi ebi ma ọ bụ nke edobere, n'oge ma ọ bụ n'ime ọnwa iri na asatọ (18). (oge a, “Oge Ekpuchi Ekpuchi”) mgbe Onye Ọrụ Ndụmọdụ kwuchara ọrụ mbụ Job maka Onye ọrụ ọ bụla (nke ọ bụla, “Onye kpuchitere”), usoro na usoro ndị a ga-adị:
Maka ndị ọrụ ndụmọdụ.
Onye ọrụ nyocha ọ bụla kwenyere na (1) ọ bụrụ na inwetara onyinye, ị ga-eme ka Stumari mara ụbọchị mbụ nke Ọrụ E kpuchiri ekpuchi (“Datebọchị Mbido”) yana usoro ndị dị mkpa maka ịnye ọrụ mkpuchi ahụ (ma gwa Stumari ngwa ngwa ede ede kwesịrị na mmalite orbọchị ma ọ bụ usoro inye onyinye gbanwere n'oge ọ bụla), (2) ị ga-enye Stumari na (a) nnomi nke Kachasị Ego kpuchiri ekpuchi, ma ọ bụ (b) mepụta akwụkwọ n'etiti gị, Onye Ọrụ na Stumari na-ekwupụta ihe Usoro ọrụ, gụnyere, gụnyere ihe ndị ọzọ, Startbọchị mmalite na ụgwọ akwụ ụgwọ, ozugbo ịbịanye aka n'akwụkwọ enyere ọrụ mkpuchi n'etiti gị na onye na-arụ ọrụ ("Datebọchị Ọma"), ka Stumari rịọrọ gị, na (3) ị ga - eme ka Stumari degharịa ozugbo ka e wepụchaa ọrụ gị dị ka onye ọrụ na (a) Onye ọrụ were gị n'ọrụ kwụsị ọrụ gị dabere na ụbọchị iri iteghete (90) nke ụbọchị arụ ọrụ gị kpuchiri ekpuchi. ibido, ma ọ bụ (b) ị jiri aka gị kwụsị ọrụ gị ekpuchi n'ime ụbọchị iri iteghete (90) ụbọchị nke ọrụ mkpuchi mkpuchi gị bidoro. N'ọnọdụ nke ga-amalite tupu Datebọchị mmalite, ma ọ bụ gị ma ọ bụ onye ọrụ ịhọrọ ịghara ịmalite mmekọrịta ọrụ nke Onye Ekpuchi ekpuchi na-atụle, ị ga-eme ka Stumari mata ozugbo.
Maka Ndị Ọrụ Ọrụ.
Mgbe onye ọrụ ndụmọdụ ga-anara onyinye a kpuchie ya, ị kwenyere Stumari ụgwọ ọ bụla ịga nke ọma (pasent ọ bụla, “Suga nke Ọma”) nke ha na pasent na-eso nke ụgwọ ọrụ onye ọrụ ndụmọdụ ewepụtara na Nleta Ekpuchi (Onye Ndụmọdụ Atụrụ) Ụgwọ ọnwa ”), ego a ga-akwụrịrị tupu ụbọchị iri atọ (iri atọ) bido ụbọchị mmalite ma ọ dịka usoro ikpe nke ọ bụla dị na ngalaba 30.b. na Nkebi 13.d. ebe a:
Ọ bụrụ n ’Datebọchị mmalite pụtara na ma ọ bụ tupu ọnụ ọgụgụ na - esote ụbọchị mgbe nmalite nke onye na - ahụ maka ọrụ Onye ọrụ na-ahụ maka ọrụ, onye ọrụ Job Base Salary Percentage
1-182 ụbọchị 15%
183-365 ụbọchị 10%
366-550 ụbọchị 5%
Ụbọchị 551 0%
Site na ịnakwere usoro ojiji ndị a, Onye na-ahụ maka ọrụ na-ekwenye na ikike ikike Stumari ka ị nweta akaụntụ Akaụntụ Onye Ọrụ maka ụgwọ ihe ịga nke ọma niile wee kwụọ Stumari na-akwụ ụgwọ na enweghị ọkwa ma ọ bụ nkwenye ọzọ chọrọ.
7.2 Ndokwa na mmeghari nke oma.
N'agbanyeghi ihe ndia edere n’elu, ma oburu n’esemokwu Faute Supa, ma oburu na onye n’enye oru nwere ike iguzosi ike na Onye n’enye onye n’enye oru nwere usoro aka oru (dika edeputara n’okpuru) ya na onye oru ndumodu tupu ijiri weebụsaịtị Stumari na / ma obu oru (dika amaliteworị usoro ịgba ajụjụ ọnụ na Onye Ọrụ Ewube Ọrụ na usoro a akwụsịbeghị, ma ọ bụ Onye Ọrụ ahụ natara Onye Ọrụ Na-ahụ Maka Onye Ọrụ Na-ahụ maka Ọrụ ịmalite ọrụ site na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ ma ọ bụ onye na-ahụ maka ọrụ. ewepuga ịkwụ ụgwọ nke ọma. Agbanyeghị, mkpebi ikpeazụ banyere ma ọ bụrụ na onye were gị n'ọrụ ji ụgwọ ihe ịga nke ọma maka onyinye a kpuchiri ekpuchi a ga-abụrịrị naanị nke Stumari. Maka ebumnuche dị ugbu a, “Nrụsi ọrụ ike” ga-apụta na-aga n'ihu na mkparịta ụka na-aga n'ihu, na-ewe ndị ọrụ ma ọ bụ na-arụ ọrụ ebe emere mkpebi ịmebe onye chọrọ ka ijide ma ọ bụ jụ, n'ime ọnwa atọ (3) tupu iji ya. na weebụsaịtị ma ọ bụ Ọrụ maka Onye ọrụ ndụmọdụ nke dị na sistemụ nlere Onye ọrụ na-achọ ọrụ ma ọ bụ nke ụlọ ọrụ na-ewe ndị ọrụ.
Ọ B IFR YOU na ARE B ANR ANR EM ịrụ ọrụ nke na-eji weebụsaịtị anyị na / ma ọ bụ Ọrụ anyị, I kwenyere na ndokwa nke Suga nke Ọma. Ọ bụrụ na ikwenyeghị na nke ọ bụla n'ime usoro ndị a, biko kwụsị akaụntụ gị ozugbo wee kwụsị iji Weebụsaịtị anyị na Ọrụ anyị ỌR TOAKA IJI IJI KAR FEBARA EGO NA-EKWU ỌB ORR AN AH OR ORB ORR OR AH ORMAT OR AH ORMAT MOD EGO Y’oburu na Onye n’enye oru choro uzo anyi ma obu ihe n’ile ma obu onye choputa onye okacha amara site na saiti na / ma obu ndi n’enye oru ma obu ndi n’enye ya onye ahia, onye ga ewe ya n’ọrụ ga akwu ego nke oma dika 25% nke ego ego nke onye isi ya. Onye ọrụ na Stumari nwere ike, iji aka ya kwụsị, wee kwụsị akaụntụ Stumari na-ewe onye ọrụ.
Ọ bụrụ na (a) Onye ọrụ na-ewe mmadụ n'ọrụ na-ewe onye na-arụ ọrụ ndụmọdụ wee kwụsị ọrụ Onye Ọrụ Ndụmọdụ dabere na arụmọrụ afọ ojuju n'ime ụbọchị iri iteghete (90) nke ofbọchị Mmalite, (b) Onye ọrụ na-ahụ maka njirimara jiri aka ya kwụsị ọrụ ya n'ime ụbọchị iri iteghete (90). nke Startbọchị mmalite, ma ọ bụ (c) Onye Ndụmọdụ Onye Ọrụ anaghị amalite ọrụ n'ihi na Onye Ọrụ na-ahụ maka Ọrụ ma ọ bụ Onye Ọrụ na-ahọrọ ọrụ ịmaliteghị mmekọrịta ọrụ a tụlere na Nyefe (Onye ọ bụla, “Oge Mmechi”), mgbe nnata na nkwenye edere ede nke ihe omuma a, Stumari ghaghaghachitere Onye oru n’onye n’iru ihe nnochu ahia nke kwuru okwu banyere onye oru igwu ya anwuchu.
Onye nke ato. Enwere ike inwe ọdịnaya sitere na ndị ọzọ na weebụsaịtị Stumari, dị ka post blog nke ndị ọrụ ndị ọzọ dere ma ọ bụ njikọ nke weebụsaịtị ndị ọzọ. Maka anyị enweghị ike ijikwa ọdịnaya ahụ, anyị abụghị ihe kpatara ọdịnaya ahụ ma ọ bụ maka weebụsaịtị nke ọdịnaya nwere ike jikọta ya.
Inweta N’ime Ndi Nke ato. Site n'iji Ọrụ ahụ, ị ​​ga-enwe ike ịnweta ọdịnaya nke ma ọ bụ sitere na ndị ọzọ (“Ndị ọzọ ọdịnaya)”. Ojiji nke Ọrụ gị bụ nkwenye maka Stumari ka ọ chee gị nke a. You na-ekwenye n'ọrụ dịịrị maka, ma na-echekwa nsogbu niile maka, iji ọdịnaya nke otu nke atọ.
O nweghi ọrụ maka ọdịnaya nke atọ. Dị ka akụkụ nke Ọrụ ahụ, Stumari nwere ike ịnye gị njikọ dabara adaba na saịtị weebụ ndị ọzọ yana ụdị ndị ọzọ nke ọdịnaya Ndị ọzọ. Enyere njikọ ndị a dị ka nsọpụrụ nye ndị debanyere aha Ọrụ. Anyị enweghị njikwa na ebe nrụọrụ weebụ nke atọ ma ọ bụ ọdịnaya ma ọ bụ nkwalite, ihe, ozi, ngwongwo ma ọ bụ ọrụ dị na ha. Site na ijikọ ọdịnaya dị otú a, anyị anaghị anọchi anya ma ọ bụ gosipụta na anyị nabatara ma ọ bụ kwadoro, ma ọ bụ anyị ga-aza maka, izi ezi ma ọ bụ ntụkwasị obi nke echiche, ndụmọdụ, ma ọ bụ nkwupụta nke ndị ọzọ na-abụghị Stumari. Anyị abụghị ndị ọrụ maka ọdịnaya Ndị ọzọ nke Nke atọ na-enweta site na weebụsaịtị anyị. Ọ bụrụ n’ikpebie ịhapụ weebụsaịtị wee nweta ọdịnaya nke atọ, ị ga - eme nke a ma ọ bụrụ na ị ga - elezi anya na usoro na usoro iwu anyị anaghị achịkwa. Should ga-atụle iwu na ụkpụrụ dị adị, gụnyere ihe nzuzo na omume nchịkọta data, nke ọdịnaya dị otú a.
Enweghị ikike iji ọdịnaya nke atọ. Nkwekọrịta a anaghị enye gị ikike ikesa, gosipụta n'ihu ọha, gosipụta n'ihu ọha, mee ka ọ dị, gbanwee ma ọ bụ jiri ọdịnaya Ndị ọzọ ọ bụla ma ọ bụghị dị ka usoro Stumari kwere.
Ikike Ịgba Ụkpụrụ na DMCA. Ọ bụrụ na ikwere na Stumari ma ọ bụ jikọọ na Stumari mebiri ikike nwebisiinka gị, biko mee ka Stumari dabere na Iwu Amụma Mgbakọ Ọchịchị Digital Millennium.
Mwepu Aka Nnọọ Mkpokọ Mmekọ. Stumari na-asọpụrụ ikike ọgụgụ isi nke ndị ọzọ ma rịọ ka Ndị ọrụ anyị mee otu ihe ahụ. Dịka 17 USC 512 (i) nke Iwu United States nwebisiinka United States, anyị ga-akwụsị nnabata onye ọrụ na weebụsaịtị ma ọ bụrụ na, n'ọnọdụ dabara adaba, onye ọrụ ahụ kpebisiri ike ịbụ onye nrụpụta ikike nwebiisinka ma ọ bụ ikike ikike ọgụgụ isi ndị ọzọ. nke Stumari ma ọ bụ ndị ọzọ. Anyị nwere ike ịkwụsị ohere maka ndị sonyere ma ọ bụ ndị ọrụ achọtara ugboro ugboro inye ma ọ bụ biputere ọdịnaya nke atọ na-echebe na-enweghị ikikere na ikike dị mkpa.
Akwụkwọ DMCA. Ọ bụrụ na ị nwe nwebisiinka ma ọ bụ onye nnọchite nke nwe nwebisiinka wee kwere na ezigbo okwukwe, na akụrụngwa ọ bụla enyere na Ọrụ a na-emebi ikike ị nwebiisinka, ị nwere ike itinye akwụkwọ ngosi dị na Iwu Millennium Digital rights (lee 17 USC 512) (“DMCA”) site n'izite ozi nlere anya echere nke ọma edegara onye nnọchiteanya Stumari họpụtara na 580 Market St, # 500, San Francisco, CA 94104.
Nzaghachi Akwụkwọ DMCA. Ọ bụrụ na Stumari mere ihe na nzaghachi mmachi, ọ ga-eme ezigbo obi ịnwa ịkpọtụrụ otu nke mere ka ọdịnaya ahụ nwee site na adreesị ozi-e kachasị ọhụrụ, ọ bụrụ na enwere, nke otu ahụ nyere Stumari. Enwere ike iziga ọkwa mmerụ ọ bụla nke DMCA na ndị ọzọ mere ọdịnaya ahụ ma ọ bụ ndị ọzọ dịka ChillingEffects.org.
Nkwupụta ama. Ọ bụrụ na ikwere na ọdịnaya okike gị nke ewepụrụ webụsaịtị ahụ anaghị emebi emebi, ma ọ bụ na ịnwere ikike n'aka ikike nwebisiinka, onye nwe ihe onye nwebisiinka, ma ọ bụ soro n'iwu, biputere ma jiri ọdịnaya ahụ i nyefere. na Weebụsaịtị, ịnwere ike izipu ozi edetu maka Stumari nke chepụtara nke ọma site na iji ozi kọntaktị edepụtara.
Nzaghachi DMCA Counter-ọkwa. Ọ bụrụ na ndị nnọchite nwebisiinka Stumari natara ngosi nkwụghachi, Stumari nwere ike iziga ndị na-eme mkpesa nzipu ozi na-agwa onye dị otú ahụ na ọ nwere ike iweghachi ọdịnaya ewepụrụ na ụbọchị azụmahịa 10. Ọ gwụla ma nwe nwebisiinka tinye akwụkwọ maka ịchọ ihe ụlọikpe nyere onye na-eweta ọdịnaya, onye otu ma ọ bụ onye ọrụ, ọdịnaya ahụ ewepụrụ ga-akpọghachi na weebụsaịtị gaa na ụbọchị iri ruo ụbọchị iri na anọ mgbe nnata nke ngosi ahụ.
Ngwongwo Ngwongwo ọgụgụ isi. Stumari na-ejide ikike niile nke ọgụgụ isi anyị, gụnyere ikike nwebiisinka, ikike anyị, na ụghalaahịa.
Enweghị Nyefe. Stumari na-ejigide ikike ikike ọgụgụ isi nke ụdị ọ bụla metụtara weebụsaịtị na Ọrụ, gụnyere nwebiisinka, ikikere, ụghalaahịa na ikike ndị ọzọ. Njirimara ndị ọzọ, akara ọrụ, eserese na akara njirimara nke ejiri na weebụsaịtị na Ọrụ ahụ nwere ike ịbụ ụghalaahịa nke ndị ọzọ. Nkwekọrịta a anaghị enyefe anyị n'aka gị ikike Stumari ma ọ bụ ikike ọgụgụ isi nke atọ, ikike niile, aha, na mmasị dị ka nke a ga-adịgide (dịka n'etiti ndị ọzọ) naanị. Anyị na-edobe ikike niile enyereghị gị aka ozugbo na Nkwekọrịta a.
Kpọtụrụ, Stumari, Stumari.com, na ụghalaahịa ndị ọzọ na-egosi, egosipụtara, ma ọ bụ ejiri ya rụọ ọrụ na weebụsaịtị ma ọ bụ na-edenye aha akụkụ ma ọ bụ ụghalaahịa iwu ma ọ bụ akara ọrụ Stumari, Inc. , ebudatara, imepụtaghachi, iji, gbanwee, ma ọ bụ kesaa n'ụzọ ọ bụla na-enweghị ikike edere ede site na Stumari, belụsọ dị ka akụkụ dị mkpa nke ọdịnaya a nwere ikike.
Nkwukọrịta Email. Anyị na-eji email na ụzọ eletrọniki iji nọrọ n'etiti ndị ọrụ anyị.
Ekwentị Nkwukọrịta Achọrọ. Maka ebumnuche nkwekọrịta, ị (i) kwenyere ịnata nkwukọrịta site na Stumari n'ụdị elektrọnik site na adreesị ozi-e nke ị nyefere ma ọ bụ site na Ọrụ ahụ; na (ii) kwenye na Usoro Ojiji niile, nkwekọrịta, ọkwa, ngosipụta, na nkwukọrịta ndị ọzọ nke Stumari na-enye gị n ’ụzọ elektrọnikụ mejuo iwu ọ bụla nke nkwukọrịta ndị dị otú ahụ ga-emeju afọ ma ọ bụrụ na edere ya. Akụkụ a anaghị emetụta ikikere ndị a na-agaghị egbochi.
Oge iwu nye Stumari ga-abụrịrị ederede. Nkwukọrịta a na-eme site na ozi-e ma ọ bụ sistemụ ozi nzuzo nke ọrụ ahụ agaghị abụ ọkwa Stumari ma ọ bụ ndị ọrụ anyị, ndị ọrụ anyị, ndị nnọchi anya ma ọ bụ ndị nnọchite anya n'ọnọdụ ọ bụla ebe amara ọkwa na Stumari chọrọ nkwekọrịta ma ọ bụ iwu ma ọ bụ iwu ọ bụla.
Nkwụsị. May nwere ike ịkagbu nkwekọrịta a ma mechie akaụntụ gị n'oge ọ bụla. Nkwụsị nke Stumari Ọrụ anaghị akwụsị mmekọrịta ma ọ bụ ibu ọrụ onye ọka iwu.
You nwere ike ịkwụsị nkwekọrịta a. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịkwụsị Ọrụ Nkwekọrịta a ma ọ bụ akaụntụ gị na Ọrụ ahụ, ịnwere ike ịkwụsị iji Stumari. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ihichapụ data akaụntụ Onye ọrụ gị, biko kpọtụrụ Stumari na info@Stumari.com. Anyị ga-ejigide ma jiri ozi gị dị ka o siri dị mkpa iji gbasoo ọrụ iwu anyị, dozie esemokwu, ma mejupụta nkwekọrịta anyị, mana igbochi ihe iwu chọrọ, anyị ga-ehichapụ profaịlụ gị zuru ezu n'ime ụbọchị iri atọ.
Stumari nwere ike ịkwụsị nkwekọrịta a. Stumari nwere ike ịkwụsị ịbanye na weebụsaịtị ma ọ bụ akụkụ ọ bụla n'oge ọ bụla, na ma ọ bụ na-enweghị ihe kpatara ya, na ma ọ bụ na-enweghị amamọkwa, dị irè ozugbo.
Mmekọrịta dị n'etiti Onye ọka iwu na nkwụsị onye ahịa. Kwụsị mmekọrịta gị na Stumari anaghị emetụta mmekọrịta gị na onye ndụmọdụ ọ bụla ma ọ bụ onye ahịa ị nwetagoro site na Ọrụ Stumari. Ọrụ iwu niile, nkwekọrịta, na ụkpụrụ omume, ọrụ na ibu ọrụ na-alanarị njedebe nke mmekọrịta Stumari.
Ndokwa ụfọdụ dịgidere nchupu. Niile ndenye nke nkwekọrịta a nke sitere na ọdịdị ha ga - adị ndụ nchupu ga - adị ndụ nkwụsị, gụnyere, na - enweghị mmachi, ihe ndị nwere ikike, nkwekọrịta akwụkwọ ikike, ụgwọ ọrụ na ikike nke ibu.
Paymentkwụ andgwọ na azụmahịa.
Usoro ịkwụ ụgwọ. A ga-ahazi ịkwụ ụgwọ dịka akọwapụtara ya na atụmatụ ahụ na / ma ọ bụ akwụkwọ ọnụahịa yana onye ahịa ya kwadoro ya na onye ọrụ ndụmọdụ. Mgbe otu ọrụ (ma ọ bụ akụkụ ya dịka nkwenye dị tupu onye ode akwụkwọ iwu na onye ọrụ ndụmọdụ) ejiri akara gosipụta ya ka onye ọrụ ndụmọdụ ahụ mezue, Stumari ga-agwa onye ahịa iwu na Job (ma ọ bụ akụkụ ya dị ka ekwenyeworị tupu o mee ede akwụkwọ onye ode iwu na onye ọrụ ndụmọdụ) ezuola. Onye Ahịa na-ahụ maka iwu ga-akwụrịrị ego ole ekwenyero ma ọ bụ rịọ mgbanwe. Ọ bụrụ na Onye Mmebe Iwu ahụ emebeghị ihe ọ bụla mgbe ụbọchị iri gasịrị, Stumari ga-enwe ikike ịkwụ ụgwọ kaadị akwụmụgwọ onye ahịa, akaụntụ akụ, ma ọ bụ PayPal maka ego zuru oke nke ego a kwetara ma ọ bụ akwụkwọ ọnụahịa na-enweghị akwụkwọ, gụnyere ọrụ dị mkpa ma ọ bụ nhazi ego. Onye ahịa ya nwere ike inyefe arụmụka banyere ụgwọ ịkwụ ụgwọ na info@Stumari.com ma ọ bụrụ na ọ na-agbaso ọnọdụ ndị ọzọ edepụtara na Nkebi 10 (Usoro Ndị Ajụjụ Ọgwụ na Onye Nlekọta Ndị Ọrụ na Onye Nlekọta Iwu Onye Ọrụ).
Ọrụ maka ịkwụ ụgwọ. Are na-ahụ maka ịkwụ ụgwọ niile, gụnyere ụtụ isi, ọrụ, yana ụgwọ nhazi, jikọtara na ojiji nke Ọrụ ahụ. Site n'iji Ọrụ ahụ, ikwenye ịkwụ onye ọrụ ndụmọdụ site na Stumari ego ole ekwenyero na Bid ma ọ bụ akwụkwọ akwụghị ụgwọ, yana ọrụ ejikọtara na ụgwọ nhazi, belụsọ ma ịgbaghara akwụkwọ ọnụahịa ahụ site na izipu ozi email na info@Stumari.com ma rube isi gaa na ọnọdụ ndị ọzọ edepụtara na Nkebi 15 (Usoro nyocha Mkpesa Nkwupụta Onye Ọchịchị). Ọ bụ ọrụ maka ịnye anyị ụzọ ịkwụ ụgwọ dị mma.
Ọrụ Stumari. Stumari kwenyere na ị ga-ewetara gị ọnụahịa zuru oke nke ụgwọ ọ bụla tupu ịkwụ ụgwọ kaadị akwụmụgwọ gị ma ọ bụ akaụntụ PayPal. Stumari kwenyere ịkwụ ụgwọ Onye ọrụ Ndụmọdụ ọdabara maka ego ole anabatara, ọrụ dị obere ma ọ bụ ụgwọ nhazi, ma ọ bụrụ na ọ dị.
Ikike ịkwụ ụgwọ. Site na nkwenye na usoro ndị a, ị na-enye Stumari ikike ịkwụ ụgwọ kaadị kredit gị, akaụntụ PayPal, ma ọ bụ ụzọ ọzọ ịkwụ ụgwọ maka ụgwọ ị nyere Stumari inye gị afọ ojuju. Dabere na nkwupụta ịkwụ ụgwọ gị, Stumari nwere ike ịkwụọ gị ụgwọ otu oge ma ọ bụ ugboro ugboro. You nyere Stumari ikike ịkwụ gị ụgwọ maka ụgwọ Onye Ọrụ Ndụmọdụ ọ bụla site na Ọrụ ahụ, yana ọrụ ọ bụla dị mkpa na ụgwọ nhazi. Maka izere obi abụọ, na otu ihe atụ, Onye Ọrụ Ndụmọdụ Na-eji naanị Ọrụ ahụ iji kwụọ gị ụgwọ maka ọrụ iwu na-abụghị ndị ọzọ nke ntinye ọnụ, site na itinye kaadị akwụmụgwọ gị ma ọ bụ akaụntụ PayPal na Stumari. ma ọ bụ onye nrụpụta ụgwọ anyị nke atọ, ị kwenyere ma kwenye na usoro ịkwụ ụgwọ edepụtara na Nkebi 12 a ga-adị.
Nkwupụta nke Onye Nkwupụta Egosiwo Nyochaa. Stumari na-ekwe nkwa ịkwụ ụgwọ akwụkwọ nkwenye ọ bụla nyochachara nke onye ọrụ nyocha maka mmezu nke ọrụ (ma ọ bụ akụkụ ya dịka nkwenye dị na mbụ nke onye ahịa ya na onye ọrụ ndụmọdụ) maka ndị ahịa iwu (Stumari '' Limitedkwụ Limitedkwụ Limitedkwụ Limitedkwụ Limitedgwọ Ga-akwụghị ụgwọ '') usoro na ọnọdụ (“Ọnọdụ Nkwupụta Paymentkwụ Limitedgwọ Nwere Oke”):
Onye ahịa ahịa emezughị akwụkwọ ọnụahịa nyocha nke Verified Consument (ego dollar nke ụdị akwụkwọ ọnụahịa ahụ, "ego anaghị akwụ ụgwọ") na ngwụsị nke ụbọchị iri (10th) ụbọchị mgbe akwụkwọ enyemaka ahụ tụfuru akwụkwọ (ụdị ụbọchị ahụ, " Datebọchị Ckwụ ligwọ Ndị ahịa na Duebọchị Iwu ”.
Onye ọrụ nyocha a na-ahụ anya enwetarala Stumari ihe edere maka ego a na-akwụghị ụgwọ (i) n'ime ụbọchị iri abụọ na otu (21), na-amalite ụbọchị ozugbo na-esochi Cbọchị Cgba Legalgwọ ahịa nke Duegba Legalgwọ (Iwu suchgba Cgwọ) Oge Onye Nkwupụta Nkwupụta Onye Nkwupụta Onye Nweta ”) na (ii) na-enye nkọwa zuru oke nke eziokwu na ọnọdụ nke Job, gụnyere mkpebi ọ bụla ndị ahịa Oru ahia nyere maka akwụghị ụgwọ na / ma ọ bụ echiche ọ bụla onye ọka iwu nwere ike ịdị mma. okwukwe kwenyere n'ihe kpatara onye ahịa ji ajụ ịkwụ ụgwọ (ụdị arịrịọ a, “Nkwado Nkwado Paymentkwụ Limitedkwụ Limitedgwọ Ego”). Enweghị ike itinye akwụkwọ anamachọghị ụgwọ mmachi akwụ ụgwọ n'ime Asambodo Onye Nkwupụta Nkwenye Onye Ọrụ ga - eme ka atụpụpụ anya nke onye ọrụ Onye Ọrụ ahụ maka ikike ya ịnata ego na - akwụghị ụgwọ site n'aka onye ọ bụla ma ọ bụ ụlọ ọrụ, gụnyere Stumari na Onye ahịa Iwu. Ruo ókè Stumari kpebiri n'otu aka ya zuru oke na ọ bara uru iji mee nke a, ọ nwere ike ịga n'ihu na mkpokọta ndị ahịa ya na ndị ahịa iwu ma ọ bụrụ na ọ ga-aga nke ọma na Onye Ọrụ Ndụmọdụ egosipụtara ga-enweta akụkụ ya nke ego ahụ anakọtara. iwepu ihe ọ bụla ezi uche na Stumari na-aba n'akpa uwe, dabere na 12.e n'elu.
N'ọnọdụ nke Onye Nyochaa Nkwenye Na-ahụ Maka Nwetara Ga-eweta Nkwube Nkwenye Na-akwụghị Okirikiri n'ime Oge Nkwupụta Ntuziaka Onye Nkwupụta Ọkachasị, ma arịrịọ dị otú ahụ nwere ozi edepụtara na nkeji okwu 14.b. nke dị n’elu, Stumari ga-anwa ezigbo okwukwe iji soro Onye Ahia na Userlọ Ọrụ Iwu Nyochaa na Nyochaa ifiedgba forgwọ ruo ụbọchị asaa (7) site na ụbọchị nke Nkwado Paymentkwụ Limitedkwụ Limitedgwọ (Ego suchkwụ Limitedgwọ). Oge igba ”ka ”) iji dozie okwu a bụ isiokwu nke arịrịọ Nkwado Paymentkwụ Limitedgwọ Na-akwụ ụgwọ (“ Okwu Esemokwu -kwụ Paymentkwụ Paymentgwọ ”). N'ọnọdụ nke Esemokwu -kwụ -kwụ -kwụ na iskwụ ụgwọ kwubiri nke ọma n’ime oge esemokwu nke Paymentkwụ ,gwọ, onye ọ bụla na Cgba ,gwọ Iwu, Onye Ọrụ Ndụmọdụ E Zuru Ezo na, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, Stumari ga - ewere usoro ekwenye iji mezuo nkwenye ahụ. mkpebi.
N'ọnọdụ nke Paymentkwụ -gwọ Okwu Esemokwu Nke Paymentkwụ remainskwụ remainsgwọ na-edozighi na mmechi nke Paymentgba -gwọ na - Esemokwu Okwu Esemokwu, Ọ ga-erughị ụbọchị asaa nke asaa (7) ụbọchị ngwụsị nke Paymentkwụ -kwụ pkwụ Disgwọ nke Esemokwu. ụbọchị a na-akọwara mkpebi dị otú ahụ na ndenye onye ọka iwu na nyocha nke onye ọrụ, Stumari ga-eme mkpebi siri ike na mkpebi zuru oke (“Mkpebi Esemokwu Ego Stumari”), dabere na ihe omuma a sitere n’aka Onye ọrụ nyocha ọfụma na, ọ bụrụ na enyere ya, Onye ahịa iwu, ma ụdị na ogo ọrụ ọrụ iwu enyere na njikọ Job metụtara ya kwekọrọ n'ụkpụrụ ụlọ ọrụ, ihe omume nke Bid metụtara na usoro ndị a. na Ọnọdụ. Ọ bụrụ na Stumari ga-ekpebi thekwụ Paymentkwụ -kwụ na-Esemokwu Paymentkwụ ingwọ kwadoro maka Onye Ọrụ Ndụmọdụ Achọpụtara, Stumari ga-enyefe Onye Ọrụ nyocha ahụ egotara na mkpụrụ ego n'ime ụbọchị asaa (7) ka ụbọchị Stumari tụgharịrị-ego ole ga-ekpebi Datebọchị, na Dbọchị Mkpebi nyocha ga-ahụrịrị na ekenyela ikike ya niile na ụgwọ maka Stumari -kwụ -gwọ metụtara. Na agbanyeghị ihe ekwuputara n’ime ya ma ọ bụ n’ụzọ megidere, ego dollar ahụ achọrọ n’okpuru Ngalaba nke 14 agaghị akarị ego mbụ ibutere n’etiti onye ahịa Iwu ama na onye ọrụ nyocha nke ejikọtara na Job ma ọ bụ ego nke esorozigharịrị n’ime ya na akwụkwọ ozi enyere aka ma ọ bụ nke ọzọ nkwekọrịta edere ede n'etiti ndị ọzọ, na ihe omume ọ bụla agaghị akarị $ 5,000 na mkpokọta gafee akwụkwọ ọnụahịa niile a na-akwụghị ụgwọ site n'aka onye ọrụ nyocha akaebe zigara Onye ahịa Iwu.
Ọ bụrụ na Stumari ga-ekpebi Okwu Esemokwu -kwụ Paymentkwụ Paymentgwọ kwadoro maka onye ahịa ya, onye ahịa ya agakwaghị enwe ụgwọ ịkwụ ụgwọ nke Onye Akwụ ụgwọ Inye ego na Onye Ọrụ Ndụmọdụ egosipụtara na a ga-eche na ekenyela ikike ya niile. n'ihe banyere thekwụ -gwọ kwụrụ ụgwọ kwụrụ ụgwọ na Stumari dịka ụbọchị nkwụghachi ụgwọ nke Stumari. N'ụdị dị otu a, a ga-ahụrịrị na ntuziaka onye ọrụ nyochachara anya ga-agbachapụ ikike ya ịchọ ụdị ahịa n'aka onye ahịa iwu, yana (ii) inwe ikike ibido usoro ikpe mkpegharị n'ihe gbasara ụgwọ a na-akwụghị ụgwọ iji kwụọ ụgwọ ya Stumari nke kwekọrọ na usoro ewepụtara na ngalaba nke 21.d. site na inye Stumari ederede edetu banyere ikike iji ikike ya mee ihe n'ime ụbọchị iri (10) ka ụbọchị ngwụsị nke Stumari na-agbagha - Ego (oge dị otú a, "Oge Paymentkwụ -gwọ-Esemokwu Nke Mpekere Oge" ). N'ọnọdụ nke Onye Nkwupụta Okwu egosiputara anaghị egosipụta ikike ya ịmalite ikpe mkpegharị n'oge Oge ịkwụ ụgwọ nkwụghachi ụgwọ maka esemokwu, a ga-eche na ọ kwụsịrị ikike ya ịkwụ ụgwọ nke ụgwọ akwụghị ụgwọ kwụrụ ụgwọ.
Stumari gha amata na onye na-akwụ ụgwọ kaadị onye ọrụ, kaadị PayPal, ma ọ bụ ụzọ nkwụnye ụgwọ ọzọ adịchaghị mma, ma ọ bụ na Stumari ga-amata na onye ahịa ya bụ nke na-enweghị ezigbo ihe kpatara ya, na-achọghị ma ọ bụ enweghị ike ịkwụ ụgwọ. maka Job, ma ọ bụ akwụkwọ Job ọ bụla ọzọ ma ọ bụ akwụkwọ a na-akwụghị ụgwọ na Stumari, Stumari ga-agwa ndị ọrụ nyocha nke onye ahịa ya bụ ndị ọka iwu Iwu / ndị ọrụ nwere nsogbu metụtara ịkwụ ụgwọ (nke a "Nkwupụta" nke a). Ọrụ niile ndị Verified Consultant User mere tupu oge ngosi a dị n'okpuru “Nkwado Limitedkwụ Limitedgwọ Akwụsịrị ụgwọ,” agbanyeghị na ọrụ niile ndị Verified Assistant rụrụ site na akwụkwọ Nkwupụta a ga-adabaghị n'okpuru "Nkwupụta Nkwado Paymentkwụ Limitedkwụ Ego." Ọ bụrụ na onye ọrụ nyocha ahụ egosipụtara, ọ ga-eweta akwụkwọ ọnụ ahịa na onye ahịa Iwu maka ọrụ emere na Nkwupụta, Stumari ka ga-agba mbọ ịnakọta ịkwụ ụgwọ maka ọrụ ndị ahụ onye ọrụ nyocha ahụ egosipụtara.
Usoro nyocha Mgbapụta Nyocha Onye Isi Iwu. N'ọnọdụ nke onye ahịa iwu nwere ezigbo okwukwe nkwenye na ọdịdị ma ọ bụ ogo ọrụ iwu enyere site na ntuziaka Nyochaa egosipụtara na ọrụ ndị dabara na ya anaghị agbanwe agbanwe na ụkpụrụ ụlọ ọrụ ma ọ bụ usoro nke Bid nke metụtara ma ọ bụ usoro ndị a. Ọnọdụ, ma ọ bụ ego ejiri kwụọ ụgwọ maka ọrụ iwu enyere nke Onye Ọrụ Ndụmọdụ dị otú a anaghị agbanwe agbanwe na ụdị ọnụ a (okwu a, "Esemokwu Esemokwu Na Ọrụ"), a ga-ahapụ ya ka ọ ghara ịkwụ ụgwọ nke ego esemokwu a. isiokwu nke ụdị okwu a (“Ego Paymentkwụ Paymentkwụ Withgwọ”), dabere na usoro na usoro ndị a (“Ọnọdụ Paymentkwụ heldkwụ Withkwụ ụgwọ”):
N'ime ụbọchị iri (10) kalenda nke ụbọchị nke akwụkwọ ọnụahịa metụtara (oge dị otú a, "Oge Nkwado Onye Esemokwu Ọchịchị"), Onye Ọrụ Iwu ahụ ga-enye ọkwa Stumari na nkọwapụta nke ọma banyere eziokwu na ọnọdụ ndị bụ ntọala nke Okwu Esemokwu Sọrọ na Ọrụ (ọ bụla, “Nkwupụta Nkọrịta metụtara Ọrụ”). Ọ bụrụ na onye ahịa ọfụma daa mwepu ọkwa arụmụka metụtara ọrụ n'etiti ọkwa onye ahịa, ọ ga - eme ka ịhapụ onye ọzọ kwụọ ụgwọ ya. Kaadị kredit, akaụntụ PayPal, ma ọ bụ ụzọ nkwenye ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ si dị na Ngalaba 13.d. Usoro Ojiji ndị a.
N'ọnọdụ nke onye ọka iwu ahụ nyefere Onye Nkwupụta metụtara Njikọ Aka Ọrụ n'etiti Oge Nkwupụta Ọchịchị Onye Ederede, na arịrịọ dị otú ahụ nwere ozi edepụtara na nkebi nke 15.a. nke dị n’elu, Stumari ga-anwa ezigbo okwukwe iji soro Onye Ọrụ Iwu yana Onye Ọrụ Ndụmọdụ Kwesịrị Ekwado ruo oge ruo ụbọchị iri na ise (15) site na ụbọchị ọkwa Ọrụ metụtara Njikọ Ọrụ (oge dị otú ahụ, “Ọrụ Esemokwu Gbasara Ọrụ. Oge Ikpehe Esemokwu ”) iji dozie okwu metụtara arụ ọrụ. N'ọnọdụ na Arụ Ọrụ Esemokwu Arụ Ọrụ Ekpeziri nke Ọma n'ime Usoro Mmekọrịta Arụ Ọrụ, Onye Ọ bụla na Onye Ọrụ Iwu, Nyochaa Nyochaa, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, Stumari ga-ewere usoro ndị ekwenyero iji gbuo ndị ekwenyero. mkpebi.
N'ọnọdụ nke ọrụ Ọrụ Esemokwu Na-arụ Ọrụ na-agaghị edozikwa na mmechi nke Ọrụ Mmekọrịta Ọrụ Esemokwu, na-abịaghị tupu ụbọchị kalenda (iri na anọ) mgbe ngwụsị nke Ọrụ Mmekọrịta Okwu Esemokwu na Ọrụ, Stumari ga-eme mkpebi siri ike na nke zuru oke (“Mkpebi Mkpesa Okwu metụtara Stumari”), dabere na ozi dị ugbu a nke Onye Ọrụ Owuwu na Onye Ọrụ Ndụmọdụ Kwadoro, maka ma ọdịdị na ịdị mma nke ọrụ iwu. a tụgharịrị na Job nke bụ isiokwu nke Ọrụ Esemokwu Na-Ego Egosiri kwekọrịtara n'ụkpụrụ ụlọ ọrụ, usoro nke ọnụahịa metụtara na usoro na ọnọdụ ndị a. Ọ bụrụ na Stumari ga-ekpebi Okwu Mmekọrịta Arụ Ọrụ Ego kwadoro na Onye Ọrụ Ndụmọdụ egosipụtara, Onye Ọkachamara Iwu ga-akwụ ụgwọ nke Onye Ọrụ Ndụmọdụ ahụ gbochiri ka Onye Ọrụ Ndụmọdụ ahụ rịa n'ime oge asaa (14) ụbọchị mgbe ụbọchị ahụ dị otú ahụ. A na-eme ka onye ọka iwu iwu dere na Mkpebi Okwu Mkpesa Mkpokọta Stumari (Nkwupụta Okwu Esemokwu metụtara Stumari ”). N'ihe mere na Onye Ahịa na-ahụ maka iwu anaghị akwụ ụgwọ n'oge, Stumari ga-enyefe Nkwupụta Paymentkwụ Withgwọ Zuru Onye Ọkachamara ifiedgba ifiedgwọ ga-ekenye ikike iji nkwụghachi maka ego dị ka Stumari nke nwere ike, na ya onwe ya, ịkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ gaa Nkebi nke 7.d na / ma obu iji hota ihe ndi ruuru ya na ogwugwo ya na ndi ozo na ndi oru iwu.
Ọ bụrụ na Stumari ga-ekpebi Esemokwu Esemokwu Ọrụ Na-akpata Maka Nkwado Onye Ọrụ Iwu, a gaghị enye Onye Ọrụ Iwu Iwu Amokwụ ofgwọ heldkwụ heldgwọ Zuru Eru na Consultgba ifiedgwọ ga-eche na enyere ya ikike ọrụ ya. dabere na ọrụ metụtara okwu agbasasị na Stumari. N'ụdị dị otu a, a ga-ahụrịrị na ntuziaka onye ọrụ nyochachara anya ga-agbachapụ ikike ya ịchọ ụdị ahịa n'aka ndị ahịa iwu, yana (ii) nweere ikike ịmalite ikpe mkpezi ahụ dabere na iwepụ ego ịkwụpụrụ. Stumari nke kwekọrọ na usoro ewepụtara na ngalaba nke 21.d. (Arbitration) site na ịnye Stumari ederede edetu banyere ikike ya n'ime ikike iri n'ime ụbọchị iri (10) ka ụbọchị ngosi nke Mkpebi Mkpebi Mkpesa Ọrụ metụtara ya (oge dị otú ahụ, Oge Ọrụ Ntinye Aka na Ọrụ metụtara Ọrụ. ”). N'ọnọdụ nke onye kwupụtara na ndụmọdụ anaghị egosipụta ikike ya iji bido ikpe ikpe n'oge oge ọrụ ntinye aka na ọrụ ahụ, a ga-eche na ọ ga-ahapụrịrị ikike ya ịkwụ ụgwọ nke ịnwe ikike ịkwụ ụgwọ nke ego a napụrụ. .
N ’ihe mere na Nyochaa antgba ifiedzọ Ndụmọdụ na Onye ahịa Iwu Abụọla nwere onwe ha n’oge niile ikike ndị edepụtara na Nkebi nke 14 na Nkebi 15, usoro e depụtara na Nkebi 15 ga-ebido n’iwu ndị ewepụtara na Nkebi nke 14 na Onye Nyocha aka Nyochaa. Onye ndụmọdụ na-ekwenye ịhapụ ikike ya nke ịhapụ ọrụ ya edepụtara na Nkebi 13 gbasara eziokwu na ọnọdụ ndị metụtara ụgwọ a na-akwụ ụgwọ. Usoro ndị edepụtara na nkebi a 15 a ga-ezo aka na ya dị ka Usoro Ngwọta ativezọ Ndị Ọzọ ”.
Akwụsịghị akwụkwọ ikike. Anyị na-enye ọrụ anyị dịka ọ siri dị, anyị anaghịkwa ekwe nkwa ma ọ bụ kwe nkwa ọ bụla maka ọrụ a. Biko gụọ akụkụ a nke ọma; ị kwesịrị ịghọta ihe ị ga-atụ anya ya.
Stumari na-enye weebụsaịtị na ọrụ ahụ “dị ka ọ dị,” na-enweghị ụdị ikike ọ bụla. N’etinyechaghị ihe ndị dị n’elu, Stumari n’onwe ya na-ekwupụta ikike niile, ma o gosipụtara, gosipụtara ya ma ọ bụ nwee iwu, gbasara weebụsaịtị na Ọrụ ahụ gụnyere, na-enweghị mmachi, ikike ọ bụla nke ire ere, mma maka otu ebumnuche, aha, nchekwa, izi ezi na enweghị mmebi.
Kpọsị, Stumari anaghị emechitere ma ọ bụ nkwa ọ bụla na ozi anyị nyere ma ọ bụ nke enyere site na Ọrụ ahụ ziri ezi, ntụkwasị obi ma ọ bụ eziokwu; na Ọrụ ahụ ga-emezu ihe ịchọrọ; na Ọrụ ahụ ga-adị n'oge ọ bụla ma ọ bụ ebe ọ bụla, na Ọrụ ahụ ga-arụ ọrụ na-anaghị akwụsị akwụsị ma ọ bụ nwee nchebe; na a ga-emezi mmezi ma ọ bụ mmejọ ọ bụla; ma ọ bụ na Ọrụ ahụ enweghị nje ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-emerụ ahụ. You na-eburu ibu ọrụ zuru oke na ihe ọghọm nke ọnwụ na-esite n'iji ozi gị, ọdịnaya ma ọ bụ ihe ndị ọzọ enwetara site na Ọrụ ahụ. Fọdụ ikike na-amachibido ma ọ bụ na-ekweghị ka akwụkwọ ikike, n'ihi na usoro a agaghị emetụta gị.
Ịkwụsị ụgwọ. Anyị agaghị ebu iwu maka mmebi ma ọ bụ mfu na-esite n'iji ọrụ a ma ọ bụ ibilite n'okpuru Nkwekọrịta a. Biko gụọ akụkụ a nke ọma; Ọ na-egbochi gị iwu gị.
Ruo n’usoro iwu nyere, na ihe agaghị ama n’ihu Stumari ga-akwụ gị ụgwọ maka ọghọm ọ bụla, ojiji, ma ọ bụ data, ma ọ bụ maka mmebi, na-apụtachaghị emebi, ihe pụrụ iche, ọghọm ma ọ bụ emebi emebi, agbanyeghị ebilite, na-esite na (i. ) ojiji, mkpughe, ma ọ bụ gosipụta ọdịnaya nke okike-mejupụtara; (ii) iji ma ọ bụ enweghị ike iji Ọrụ ahụ; (iii) Ọrụ ahụ n'ozuzu ma ọ bụ ngwanrọ ma ọ bụ sistemu na-eme ka ọrụ ahụ dị; ma ọ bụ (iv) mmekorita ọ bụla na Stumari ma ọ bụ Onye ọrụ ọ bụla ọzọ, ma dabere na akwụkwọ ikike, nkwekọrịta, mmekpa ahụ (gụnyere ileda anya) ma ọ bụ usoro iwu ọ bụla ọzọ, na Stumari gwara ma ọ bụ na ọ gaghị agwa Stumari na enwere ụdị mmebi ahụ, na ọ bụrụgodi na edozigharị ụzọ dị na Nkwekọrịta a adabaghị na nzube ya dị mkpa. Stumari agaghị enwe ibu ọrụ maka ọdịda ọ bụla ma ọ bụ na-egbu oge n'ihi ihe karịrị ike anyị. Fọdụ ikike na-amachibido ma ọ bụ na-anaghị ekwe ka ndị na-ebu ọrụ dị n'aka, yabụ na ihe a nwere ike ọgaghị emetụta gị.
Onye nke ato. Ndị ọrụ ndụmọdụ na-ezubere ndị ọzọ uru mpaghara a nke Usoro eji. Ozi ọ bụla iwu nyere na Ọrụ ahụ bụ maka ebumnuche ozi. Stumari na onye okike okike nke ihe omuma nke okike n’inwe ozi gbasara ya napupu ikike niile, ma obu igosiputa ya, iwu ma obu ihe ozo, tinyere ma ejedebeghi na ikike ebighebi nke ire ahia, mmebi nke ndi mmadu nke ato, na ahu ike maka otu ebumnuche. , rue oke oke nke iwu nyere. Na ọdịghị ihe ọ bụla Stumari ma ọ bụ Onye Ọrụ Ndụmọdụ ga-akwụ ụgwọ maka mmebi ọ bụla (gụnyere, na-enweghị nkwụsịtụ, mmebi na nsonaazụ ya, mmerụ onwe ya / ọnwụ na-ezighi ezi, uru furu efu, ma ọ bụ mmebi nke sitere na data furu efu ma ọ bụ nkwụsị ahịa) n'ihi ojiji ma ọ bụ enweghị ike iji Ọrụ ahụ ma ọ bụ ọdịnaya-N'enye ọdịnaya, ma ọ dabere na akwụkwọ ikike, nkwekọrịta, mmekpa ahụ, ma ọ bụ usoro iwu ọ bụla ọzọ, yana Stumari ma ọ bụ ndị na-enye ntinye aka na ntinye aka na ntinye aka na-atụ anya na ọ ga-ekwe omume ụdị mbibi a. Abughi Stumari ma ọ bụ ndị na-eweta ntinye aka nke Onye ọrụ-ewepụta ọdịnaya na-akwụ ụgwọ maka mmerụ onwe onye ọ bụla, gụnyere ọnwụ nke kpatara site na ojiji ma ọ bụ ojiji nke Ọrụ ahụ ma ọ bụ ọdịnaya ejiri ọdịnaya.
Mwepụta na Mwepu
Kwenyere ka iwepu Stumari na-adịghị emerụ ahụ na ma na-emegide ebubo na mmefu niile, gụnyere ego ndị ọka iwu, na-esite na ojiji nke weebụsaịtị na Ọrụ ahụ, gụnyere ma ejedebeghị na mmebi nke Iwu a.
Ọ bụrụ na gị na otu Onye ọrụ ma ọ bụ karịa nwere nghọtahie, ịhapụ Stumari na nkwuputa, ihe ndị ọzọ na-emebi na ụdị ọ bụla na ụdị ọ bụla, ama ama na amaghị, na-ebilite ma ọ bụ n'ụzọ ọ bụla jikọtara esemokwu ndị dị otú ahụ. Ọ bụrụ n ’onye bi na California, ị na-agbaghara California Civil Code §1542, nke na-ekwu:“ Ntọhapụ n'ozuzu ya anaghị ekwucha ihe onye mgbazinye na-amaghị ma ọ bụ chee na ọ ga-enweta ihu ọma ya n’oge igbu onye ahụ, ma ọ bụrụ mara onye ọ maara nke ọma emetụtala mmekọrịta ya na onye ji ya ụgwọ. ”
Ngbanwe nke Usoro Ojiji. Stumari nwere ike imezigharị nkwekọrịta a site n'oge ruo n'oge, na naanị ikike Stumari. Anyị ga-ewetara ndị ọrụ mgbanwe ihe na nkwekọrịta a (i) site na izipu ọkwa na adreesị ozi-e mbụ akọwapụtara na akaụntụ gị, nke ga-amalite ozugbo na izipu ozi-e a, yana / ma ọ bụ (ii) site na weebụsaịtị anyị. opekata mpe, ụbọchi iri atọ tupu mgbanwe ahụ na - arụ ọrụ site na ikenye ọkwa na ibe anyị. Mgbanwe ndị na-abụghị ihe na Nkwekọrịta a ga-amalite ozugbo. Anyị na-akwado ndị ọbịa ka ha lelee ibe a ugboro ugboro maka mgbanwe ọ bụla na nkwekọrịta a. Gị n’iji Ọrụ ahụ rụọ ọrụ mgbe ụbọchị mbipụta nke Nkwekọrịta a dị adị ga-eme ka ịnabata usoro ya.
iche. Iwu California a na-achịkwa nkwekọrịta a. Gị, naanị gị, na-ahụ maka ọrụ ọ bụla ị nabatara n'okpuru nkwekọrịta a. Ọ bụrụ na anyị na-etinye aka na jikọrọ ọnụ ma ọ bụ zụta anyị, anyị nwere ike ibufe Nkwekọrịta a, ọ bụrụhaala na echebere ikike gị. May ga-ekwenye naanị n’okwu ndị a ma ọ bụrụ na ị ga-enwe ike ịhazi nkwekọrịta na steeti gị. Usoro ndị a, gụnyere Iwu Nzuzo anyị, bụ nkwekọrịta zuru oke n'etiti anyị, ọ nweghị usoro ndị ọzọ na-etinye.
Iwu na-achị achị. Ewezuga oke ọdabara iwu enyere ma ọlị, nkwekọrịta a n'etiti gị na Stumari yana ohere ịbanye ma ọ bụ ojiji Weebụsaịtị ma ọ bụ Ọrụ ahụ bụ nke iwu gọọmentị etiti United States America na iwu nke steeti California, na-elele na ngabiga nke iwu. Gị na Stumari kwenyere ịnyefe ikike na ebe dịpụrụ adịpụ nke ụlọ ikpe ndị dị na City na County nke San Francisco, California, belụsọ dị ka enyere ya n'okpuru Nkwekọrịta a.
Oge nsogbu. Ọ bụrụ na ejiri akụkụ ọ bụla nke nkwekọrịta a ghara ịdị irè ma ọ bụ ghara ịgbagha, akụkụ ahụ nke nkwekọrịta ahụ ga-arụ ọrụ iji gosipụta ebumnuche ndị ọzọ. Akụkụ ndị fọdụrụnụ ga-adịgide n'ike na arụmọrụ. Okpu o bula nke Stumari mejuputara itinye aka obula banyere nkwekorita a, agagh ewere ya na ilepu ikike anyi nwere anya inye mmanye a. Ikike anyị dị n'okpuru Nkwekọrịta a ga-alanarị nkwụsị ọ bụla nke Nkwekọrịta a.
Mmachi nke Usoro nke Ọrụ. Kwenyere na ihe ọ bụla metụtara ihe metụtara gị ma ọ bụ ebilite na mmekọrịta gị na Stumari ga-amalite n'ime otu afọ mgbe ihe kpatara nke esiri ewee. Ma ọ bụghị ya, a na-egbochi ihe dị otú ahụ na-adịgide adịgide.
Aka Okwu Ikpe. Ọ bụrụ na esemokwu ebilite n’etiti gị na Stumari, anyị ga-achọ inye gị ụzọ kwụpụ iche na ọnụ ahịa iji dozie esemokwu ahụ ngwa ngwa. Yabụ, maka arịrịọ ọ bụla (belụsọ maka nkwupụta maka enyemaka ma ọ bụ nha anya kwesịrị ma ọ bụ nkwupụta gbasara ikike ikike ọgụgụ isi) n'okpuru Nkwekọrịta a, ndị otu nwere ike ịhọrọ idozi esemokwu ọ bụla na-ebilite n'okpuru nkwekọrịta a site na ntinye aka na-abụghị nke ngosipụta. Ndị otu na-ahọ ntuli aka ga-ebido ya site na ndọrọndọrọ ọzọ nke esemokwu (“ADR”) nke ndị ọzọ kwadoro. Onye na-eweta ADR na ndị ọzọ ga-agbaso iwu ndị a: (a) a ga-eme mkpebi ahụ, na ntinye nke ndị ọzọ chọrọ enyemaka, site na ekwentị, ntanetị, ma ọ bụ dabere na ntinye ederede; (b) mkpegharị ikpe ahụ agaghị emetụta ọhụụ ọ bụla site n'aka ndị otu ahụ ma ọ bụ ndị akaebe ọ gwụla ma ndị ọzọ kwenyerịrị; na (c) ikpe ọbụla gbasara ihe emere mmadụ n’inye ya ikpe nwere ike banye n’ụlọ ikpe ọ bụla nwere ikike.
Na-abụghị Ọrụ Stumari nwere ike ikenye ma ọ bụ nyere ndị ọzọ Usoro iwu a na / ma ọ bụ Stumari Nzuzo Stumari, n'ozuzu ma ọ bụ akụkụ, onye ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla n'oge ọ bụla ma ọ bụ na-enweghị nkwenye gị. Maynweghị ike ikenye ma ọ bụ nye ndị ọzọ ikike ma ọ bụ nye ikike n'okpuru Usoro Ojiji ma ọ bụ Iwu Nzuzo na-enweghị nkwenye ederede Stumari tupu edee, na ikike na ndị nnọchi anya na-enweghị ikike site n'aka gị bụ ihe efu.
Isi okwu na nchịkọta nke enweghị ihe mgbochi. N’ime nkwekọrịta a, ngalaba ọ bụla nwere aha na nchịkọta nke usoro na ọnọdụ ndị a. Aha ndị a na nkenke ederede dị nkenke.
Nkwenye zuru ezu. Usoro Ojiji ndị a, yana Iwu Nzuzo na https://www.Stumari.com/privacypolicy, na-anọchite anya nkwupụta zuru oke na nkwekọrịta dị n'etiti gị na Stumari. Nkwekọrịta a tụkwasara ma ọ bụ edepụta ma ọ bụ nkwenye ọ bụla tupu ọ bụla, na nkwukọrịta ndị ọzọ n'etiti gị na Stumari metụtara okwu nke Nkwekọrịta a. Enwere ike gbanwee akwụkwọ nkwekọrịta a site na ndezigharị onye isi ikike Stumari bịanyere aka na ya, ma ọ bụ site na post Stumari nke mbipụta edegharịrị.
Ikike inye nkwekọrịta. Na-anọchi anya ma nyekwa gị iwu na ọ bụrụ n’ị bụ mmadụ, ị tozuru ogo iwu iji kọọ nkwekọrịta; ma ọ bụ ọ bụrụ na are na-edebanye aha gị na ụlọ ọrụ, na enyere gị ikike ịbanye, ma kegide ya, Usoro Iwu ndị a yana ịdebanye aha maka Ọrụ ahụ.
You kwenyere na ịgula Usoro Ojiji ndị a, ghọta Usoro Ojiji, usoro a na ọnọdụ ndị a ga-agbagide gị.